Cnc Part Oem, သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ၊ လိုအပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများ - Daohong
တရုတ်နိုင်ငံရှိကုန်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုစက်လည်ပတ်ခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲခြင်း Da Da - CNC မှကြိုဆိုပါတယ်။
ကုမ္ပဏီသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည့်နေရာ ၃ ခုတွင် CNC အစိတ်အပိုင်းများ ၀ န်ဆောင်မှု၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ဂီယာအပိုပစ္စည်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ surf leash၊ အခြား surfing ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် TV mount, စားပွဲခုံကဲ့သို့သော Consumer Electronics အစိတ်အပိုင်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သည်သုံးစွဲသူများကိုပျော်ရွှင်စေရန်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်
အကြီးစား Dive ဆုံလည်
2. အရွယ်အစား 38mm, 45mm ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်
15m နှင့် 30m ရေငုပ် Reel
1.Our ထုတ်ကုန်များသည်ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုလုံးအစုံဖြစ်ပြီး ၁၅ မီတာ / ၃၀ မီတာ / ၄၅ မီတာ / ၅၀ မီတာသို့မဟုတ်ထုံးစံအလျားအပြားမျဉ်း၊ ၀.၅ မီတာပတ်ပတ်လည်ရှိသည်။
2.Aluminum သတ္တုစပ် reel ။
4.316 သံမဏိချိတ် 90mm, ပလပ်စတစ်သေတ္တာ။
SUP Legrope ဖြောင့်
2. ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား, ထုပ်ပိုးပစ္စည်း, ထုပ်ပိုးနည်းလမ်း။
Bodyboard ကွိုင် Leashes
1.CORE: surfboard leash၊ စွမ်းအားမြင့်မားမှု၊ elasticity ကောင်းမွန်မှုနှင့်မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုအတွက် TPU Polyurethane ပစ္စည်း။
2. CUFF: ကျွန်ုပ်တို့၏ SUP leash ၏ခြေကျင်း cuff သည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသော neoprene ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
3.SWIVEL: Doulbe သံမဏိဆုံလည်နှင့်အတူဒီဇိုင်း။
၄. ရထားသိမ်းဆည်းခြင်း - လေးလံသောမီးရထားချွေတာသူသည်ကြိုးကို surf board တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်းများအတွက် Spline Shaft နှင့် Gear Shaft
1. ဂီယာအုံ၊ စက်ယန္တရားများ၊ ပုံနှိပ်စက်များ၊ အထည်အလိပ်စက်များ၊
3.OEM & ODM အထောက်အပံ့;
စိတ်ကြိုက် Shaft အစိတ်အပိုင်းများ
ဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်နမူနာများအတွက် ၁။ ပညာရှင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
ဂီယာတွင်စက်ရုံအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိသည်
ဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်နမူနာများအတွက် 3.Professional စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
4.OEM & ODM အထောက်အပံ့;
စိုက်ပျိုးရေး Shaft အစိတ်အပိုင်းများ
၃.High precision tolerance (အသေးငယ်ဆုံးသည်းခံနိုင်မှု + +-- 0.001mm)
၃။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု (အသေးငယ်ဆုံးသည်းခံနိုင်မှုသည် +/- 0.001mm)
4. OEM & ODM ထောက်ခံမှု;
1. Heavy Duty သံမဏိဆုံလည်
ပြproblemsနာ 2. ပုပ်စပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိမ်ခြင်းမရှိပါ
၃။ ရေငုပ်ခြင်း၊ surfing၊ မြင်းစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ဥယျာဉ်ဆွဲထားခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်သင့်တော်သည်
အရည်အသွေးမြင့် 3-way Fis ...
2. Heavy Duty သံမဏိဆုံလည်
၄။ ရေငုပ်ခြင်း၊ surfing လုပ်ခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ဥယျာဉ်ဆွဲထားခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်သင့်တော်သည်
2. လိုင်းငါးဖမ်းလှေများသည်ခဲဆိပ်များ၊ အမျိုးအစား ၈ ခု၊ လှိမ့်ခြင်း၊ သေတ္တာ၊ ချီစက်၊
1.Heavy Duty 316 သံမဏိဆုံလည်
3. အလေးချိန် 6.5 ဂရမ်, 880lb စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်
5.Material: သံမဏိ ၃၁၆၊ ကြေးဝါ
316 သံမဏိ di ...
- Heavy Duty သံမဏိဆုံလည်
2, အရွယ်အစား: requst အပေါ် 3.5mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10.5mm 12mm
ငါတို့ငွေနှင့်လုံခြုံသော IN သင်၏ငွေ။
ကုန်သွယ်ရေးအာမခံသဘောတူညီချက်နှင့်ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုစီအတွက် ၅% လျှော့စျေးပေးပို့ချိန်နောက်ကျခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လည်ပတ်စဉ်အတွင်းအခမဲ့ဟိုတယ်【 NINGBO-JIANGSU 】
အရည်အသွေးတစ်ခုအလျှော့မပေးကတိကဝတ်။ သင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်မရွေး = >> 24 နာရီအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါပြီ
သင်၏နည်းပညာနှင့်ဒီဇိုင်းကို NDA မှကာကွယ်နိုင်သည်။ သင်၏သတ္တုထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက်တစ်နေရာတည်းသောဖြေရှင်းချက်
သင်၏မေးမြန်းချက်ကို ၆ နာရီအတွင်းကိုးကားနိုင်သည်။7ရက်အတွင်းအစာရှောင်ခြင်းနမူနာ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးဖြင့်ဈေးအသင့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုကတိပေးသည်။ အားလုံးဖြစ်စဉ်များစဉ်အတွင်းစုံလင်သော QC စနစ်
အရည်အသွေး & ထိန်းချုပ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Quotation Engineer (၃) ခုရှိပြီး၊ နိုင်ငံခြားသားဖောက်သည်များအတွက် (၆) နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အတွက်သင့်တော်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်နှစ်ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဈေးနှုန်းကိုရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Technician Engineer သည်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၅ နှစ်ကျော်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်နမူနာများနှင့်အကြံဥာဏ်များအရတရားဝင် 2D ပုံဆွဲခြင်းနှင့် 3D ပုံဆွဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏အကြံဥာဏ် + DAOHONG = ထုတ်ကုန်များ
ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ထုတ်လုပ်မှုသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်နှစ် (၁၀) နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ R&D အဖွဲ့သည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ တ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ surfing အစိတ်အပိုင်းလိုပဲ; တီဗီနံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားပြီး ...
Ningbo Daohong Machine Co. , Ltd. သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှစ၍ Ningbo yuyao ခရိုင်ရှိနေရာအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအသစ်ရဲ့နေရာဟာအရင်ကထက်အများကြီးပိုကြီးပြီးလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကပိုကောင်းတယ်၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်က ...